Soo dejisan TomTom Home 2.9.8.3568 – Vessoft
Soo dejisan TomTom Home
Tomtom Home – software ah si ay u maareeyaan qalabka ee GPS-navigation kaas oo soo saaray shirkadda Tomtom. Software wuxuu kuu ogol yahay in la xakameeyo nidaamka navigation iyo helitaanka waxyaabaha qalabka. Tomtom Home saamaxaaya in ay ku rakibi khariidadaha cusub iyo adeegyada, ama gurmad soo celiyo files qalabka, reserved qorsheeye wadada iwm software The kuu ogolaanayaa inaad isku xiro adeegyada ay u helaan farriimaha ku saabsan gaadiidka ee qaabka waqtiga dhabta ah iyo digniino ah oo ku saabsan kamaradaha ammaanka markuu iyagii u dhowaanin. Tomtom Home kale oo ku jira tilmaanta of xaaladda map kaas oo caawisaa in map-ka ee gobolka dhabta ah ee ay la qabsado oo la xariirta wadooyinka.
Management of qalabka ee GPS-navigation ka Tomtom
Kartida aad u geeyaan una saxaan maabka
Connects si adeegyada kala duwan
Recovery iyo raad raac ah oo files
Comments on TomTom Home:
TomTom Home Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Comodo Dragon 52.15.25.663
العربية, English, Українська, Français... Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro iyo Internet
العربية, English, Français, Español... Unlocker 1.9.2